Momba anay - SUNKON Intelligent Technology Co., Ltd.
Ekipa aorian'ny fivarotana
SUNKON dia mpanamboatra matihanina amin'ny fitaovana fanodinana fitaratra ao Shina. Ny orinasanay dia manokana amin'ny famokarana milina fanodinana vera. Ohatra: Glass Straight Line Edging Machine, Glass Straight Line Beveling Machine, Glass Straight Line Double Edging Machine, Glass Straight Line Round Edging Machine, Glass Shape Beveling Machine, Glass Drilling Machine, Glass Glass Machine, Glass Sandb mandrakizay Machine sns. Manana fitaovana famokarana be pitsiny, fitaovana fanaraha-maso kalitao mazava tsara, famolavolana matanjaka sy famokarana. Izahay dia miantoka kalitao "aotra".
Izahay dia manolo-tena hanome fitaovana fanodinana vera tonga lafatra ho an'ny mpanjifa, miaraka amin'ny toe-tsain'ny orinasa "hentitra, azo antoka, mandroso, manavao". "Tsy afa-po mihitsy, mikatsaka tsaratsara kokoa" no teny filamatrinay. Manantena izahay ny hanoratra toko briliant miaraka amin'ny ianao! Mampiasa milina fitaratra SUNKON erak'izao tontolo izao toa an'i Etazonia, Aostralia, Torkia, Mexico, Brezila, Rosia, Kazakhstan, Armenia, Syria, Arabia Saodita, lran, Maroc, Tunisia, Kambodza, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Pakistan ary sns. Nahomby tamin'ny fiaraha-miasa tamina mpamokatra fanodinana vera mihoatra ny 1000 ary namatsy fitaovana maherin'ny 4500 SETS ao an-toerana sy any ivelany.
Ao afovoan'i Azia no misy anay, miaraka amina fampifanarahana politika mahamety sy mivezivezy mety. Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia manana traikefa ara-barotra matotra sy maharitra isika.
Noho ny toe-javatra mety, miaraka amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fampirantiana iraisam-pirenena sy ny sakany misy fiantraikany lehibe, dia mora kokoa amin'ny orinasanay ny hanafainganana ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny varotra milina fitaratra. Mahazo mari-pahaizana iraisam-pirenena marobe ihany koa izahay, toy ny CE, SGS , sns.
SUNKON (CGTECH) dia mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny milina fitaratra sy ny teknolojia. Maherin'ny 10 taona lasa izay, nanangana ny ivon-toerana misy ny R & D faritany izahay, manizingizina izahay amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny milina amin'ny fotoana rehetra. Hatramin'izao, niara-niasa tamina orinasa mpamokatra fanodinana vera mihoatra ny 1000 izahay ary nanolotra mihoatra ny 4500 mametraka fitaovana ao an-trano sy any ivelany.
taona vitsivitsy lasa izay dia nahazo laza tsara avy tamin'ny mpanjifantsika na ny tsena eran-tany China na ny tsena SUNKON (CGTECH).
SUNKON (CGTECH) dia mpanamboatra matihanina amin'ny milina fanodinana vera isan-karazany, miaraka amin'ny zavamaniry 5 000m2. Teknisiana & injeniera mihoatra ny 3 no manana traikefa lehibe na amin'ny famolavolana milina inct na amin'ny fanodinana vera mihoatra ny 15 taona, mpiasa maherin'ny 50. Nametraka ny rafitra fitantanana famokarana tonga lafatra sy ny fanaraha-maso kalitao henjana ary ny rafitra fanaraha-maso, ny antsipiriany rehetra momba ny masininay araka izay azo atao mba hahatratrarana fiantohana kalitao "ZERO".